HomeEnglandMan City Oo Lacag Badan Ku Dooneysa Coutinho
Manchester City ayaa qorshaynaysa in ay si degdeg ah ugu dhaqaaqdo laacibka Philippe Coutinho.
Kooxda haysata horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ayaa waxay liiskeeda xagaaga ay dooneyso ku dartay kubbad sameeyaha reer Brazil iyo waliba Raheem Serling oo diiday dalab ay kooxdiisu ugu soo bandhigtay in uu heshiiska u cusboonaysiiyo. Sidoo kale, kabtan ku-xigeenka kooxdaas ee Jordan Henderson ayaa si lama filaan ah loogu arkay liiska ay City dooneyso.
Coutinho oo bishii February u saxeexay kooxdiisa heshiis wakhti dheer oo soconaya illaa sannadka 2020, kaas oo toddobaadkii uu ku qaadanayo lacag dhan £70,000, ayay Manchester City dooneysaa in ay ku khasabto Liverpool inay ka iibiso iyadoo lacag badan ku beddelanaysa.
Coutinho oo ay da’diisu tahay 22 jir ayaa doonaya in uu u ciyaaro koox Champions League ku jirta, iyadoo kooxdiisuna ay hadda kaalinta 5aad ee horyaalka fadhiyo, isla markaana aanay qabin rajo badan oo ah in ay kor u soo kacdo.
Sannadkii 2013 ayay Liverpool lacag dhan £8.5million ku iibsatay Coutinho isagoo ka yimid kooxda Talyaaniga ah ee Inter Milan, waxaanu illaa wakhtigaas ka mid noqday xiddigaha sida gaarka ah isha loogu hayo, iyadoo uu afartii jeer ee u dambeeyey ee ay Liverpool la ciyaartay Manchester City uu ka dhaliyey saddex gool.
Manchester City oo u muuqata in sannadkan uu ugu dhamaanayo gacmo madhan oo aanay waxba ku guuleysan doonin iyadoo horyaalkana kaalinta 4aad kaga jirta, ayaa waxay u bandhigaysa Liverpool lacag dhan £35 million, laakiin lama garanayo go’aanka ay kooxda Reds ka qaadan doonto.
Coutinho ayaa habeenkii xalay Liverpool ka caawiyey in ay u gudubto wareegga semi-finalka ee FA Cup kadib markii uu gool lagu rafaaday ka dhaliyey Blackburn oo ay ciyaartii horena barbar dhac 0-0 ah ku kala baxeen.
Mesut Ozil Oo Ku Soo Noqonaya Garoomada Kadib Dhaawac Muddo Qaatay
Isku Aadka Koobka Adduunka Oo La Shaaciyey Iyo Wakhtiga Uu Bilaabmayo
Somalia iyo Niger Oo Maanta Wada ciyaaraya Isreeb-reebka Koobka Adduunka
09/10/2015 Abdiwahab Ahmed